Ukuwa kweNtshonalanga yeCing Qing: Izizathu kunye neZingcebiso
Xa i-China Qing Dynasty yawa ngo-1911-1912, yaphawula ukuphela komlando wesizwe ongummangaliso omkhulu. Loo mlando wabuyela ubuncinane ukuya ku-221 BCE xa iQin Shi Huangdi kuqala ihlangene neChina ibe yinye ubukhosi. Ngexesha elininzi kweso xesha, iChina yayingumntu oyedwa, ongenakuphikiswa kwamandla aseMpuma Asia, kunye namazwe angomakhelwane afana neKorea, iVietnam, kunye neJapan ehlala esenqabileyo ekulandeleni inkcubeko yayo.
Emva kweminyaka engaphezu kwe-2,000, nangona kunjalo, amandla okumkani waseTshayina ayeza kuwa phantsi.
Abalawuli baseManchu baseChina baseQing Dynasty babephakathi koBukumkani baseMbindi ukususela ngo-1644 CE, xa bawutshabalalisa ukugqibela kwe-Ming, kwada kwaqala kwinkulungwane ye-20. Iindlu ziya kuba yindoda yokugqibela yolawulo lobukhosi ekulawuleni iChina. Yintoni eyabangela ukuwa kwelo buso elinamandla elinamhlanje, elihlala kwixesha lanamhlanje eChina ?
Ukuwa kweChina yaseKing Dynasty kwakuyinkqubo ende kwaye inzima. Ukulawula i-Qing kwancipha ngokukhawuleza kwisahlulo sesibini sekhulu leshumi elinesithoba kunye neminyaka yokuqala yemashumi amabini, ngenxa yokubambisana okunzima phakathi kwezinto zangaphakathi nangaphandle.
Enye yegalelo elikhulu kwi-Qing China yehlelwa yi-European imperialism. Amazwe asekhompyutheni eYurophu asebenza ngamandla kwiindawo ezininzi zaseAsia naseAfrika ngasekupheleni kweminyaka engamashumi amabini aneshumi elinesibhozo kunye neengqungquthela.
Iphulo elibhubhisa kakhulu lafika kwii- Opium Wars zika-1839-42 no-1856-60, emva koko iBrithani zenze izivumelwano ezingalinganiyo kwiShayina eyahlulwa kwaye yalawula u Hong Kong . Oluhlazo lwabonisa bonke abemi baseTshayina kunye neengqungquthela ukuba iChina eyayisakuba namandla yayinobuthathaka kwaye isengozini.
Ngenxa yobuthathaka obonakalisiweyo, iChina yaqala ukulahlekelwa amandla kummandla wembambano.
IFransi ibanjwe kwi-Asia-mpuma ye-Asia, idala i-coloni yayo ye- Indochina yesiFrentshi . IJapan yahlutha iTaiwan, yathatha ulawulo olusebenzayo lwaseKorea (owayengumdlali waseTshayina) olandelayo emva kweMfazwe yokuqala yeSino-yaseYapan ye-1895-96, kwaye yamisa iimfuno zorhwebo ezingafaniyo kwi-Treaty ye-1895 yaseShimonoseki.
Ngowe-1900, amagunya angaphandle aquka iBrithani, iFransi, iJamani, iRashiya kunye neJapane basebenzise "imida yempembelelo" kunye nxweme laseChina - indawo apho amagunya angaphandle alawulwa ngokurhweba kunye nemikhosi yempi, nangona ngokoqobo behlala beyingxenye yeKing China. Isilinganiselo samandla sasisigxina ngaphandle kwenkundla yombuso kunye namagunya angaphandle.
Nangona iingcinezelo zangaphandle zikhutshwe kulawulo lukaKing China kunye nommandla walo, ubukhosi baqala ukunyuka ngaphakathi. Isiqhelo saseHin Chinese sasiyinyaniseka kubalawuli be-Qing, ababeyiManchus evela ngasentla. Iimfazwe ze-Opium IiNtshontsho zazibonakala zibonakalisa ukuba ubukhosi bomntu osisigxina belahlekelwe iGunya likaZulwini kwaye kwakufuneka lihluthwe.
Ekuphenduleni, i-Qing Empress Dowager Cixi yavala ngokukhawuleza kubaguquli. Esikhundleni sokulandela indlela yokubuyisela iMeiji yaseJapane , nokuphucula ihlabathi, uCixi wagcwalisa inkundla yakhe yokuvuselela.
Xa abalimi baseTshayina bephakamisa intshukumo enkulu yokulwa nowasemzini ngowe-1900, obizwa ngokuba yi- Boxer Rebellion , ekuqaleni bachasene neentsapho ezilawulayo zaseQing kunye namandla aseYurophu (kunye neJapan). Ekugqibeleni, imikhosi ye-Qing kunye nabalimi babumbene, kodwa abazange bakwazi ukunqoba amandla angaphandle. Oku kwabonisa ukuqala kokuphela kweNkcazo yaseKing.
I-Qing Dynasty ekhubazekile yahlala emagunyeni kwenye iminyaka elishumi, emva kweendonga zesiXeko esingavumelekanga. U-Emperor wokugqibela, u- Puyi oneminyaka engama-6 ubudala, washiya isigodlo ngoFebruwari 12, 1912, ekupheliseni nje kuphela i-Qing Dynasty kodwa ixesha elide lamawaka e-China.
Inkcazo yeqela lamaKhomanisi aseTshayina
Ziziphi iintlobo ezahlukeneyo zesiTshayina?
Imbali emfutshane yeTaiwan
'Awuyi Kukholelwa Lithini Le Ntombazana Ekhulelwe!' Scam yeVidiyo
Ukuphucula amaHemorrhoids Ngokwemvelo
Uludwe lweeNdawo zamaKomanisi zangoku kwihlabathi
Ndiwa njani ngokukhuselekileyo ngelixa i-Skateboarding?
Kutheni i-ISIS ifuna ukuseka ulwahlulo olutsha?
Iphrofayili kaJoycelyn Harrison, iNjineli yeNASA kunye ne-Inventor
I-Renaissance yaseVenice - i-History History 101 Basics
Iiprogram zeZikolo zoShishino ze-Columbia kunye nokuVunywa